विष्णु पुराण : महिला र पुरुषले गर्न हुँदैन यी ४ काम – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/विष्णु पुराण : महिला र पुरुषले गर्न हुँदैन यी ४ काम
एजेन्सी, विष्णु पुराणमा विभिन्न शास्त्रीय महत्व र मानिसले पालना गर्नुपर्ने नियमको बारेमा बताइएको छ ।विष्णु पुराणमा भूगोल, क’र्मकाण्ड, ज्योतिष, राजवंश र भगवान श्रीकृष्णको च’रित्रको बारेमा वर्णन गरिएको छ । जो मानिस सुखी जीवन बिताउन चाहान्छ, त्यसले विष्णु पुराणका यी नि’यम जान्नै पर्ने हुन्छ ।१. निरोगी तथा राम्रो बनिराख्नका लागि हरेक दिन वि’हा नुहाउनुपर्दछ । यदि नुहाएको बेला दिमागमा केहि कुरा आयो भने शुभ फल प्राप्त हुन्छ ।विहानै उठेर सूर्य उदय हुनुभन्दा पहिला ताराहरुको छाया हेर्दै नुहाएमा अलक्ष्मी, समस्या र नराम्रो श’क्ति न’ष्ट भएर जान्छ ।
नुहाउने समयमा गुरु मन्त्र, स्तोत्र तथा श्लो’कहरु वा भगवानको नाम लियो भने पनि अक्षय पुण्यको लाभ हुन्छ । तर धेरैबेरसम्म नुहाउँदा भने स्वास्थ्यलाई हा’नी हुन्छ ।२. साथै जीवनशैलीमा निन्द्रा राम्रो लिन आवश्यक छ । हरेक दिन ७ देखि ९ घण्टासम्म नि’दाउन आवश्यक हुन्छ । यदि राम्रो निन्द्रा पुगेन भने तपाई बि’रामी हुनुहुनेछ ।शास्त्रका अनुसार विहा छिटै उठ्ने र बेलुका चाँडै सु’त्नुपर्दछ । तर शास्त्रले दिनमा सुत्नुलाई नराम्रो मान्ने गरेको छ ।३. साथै विहानको समयमा श्रीमानश्रीमतीले शा’रीरिक स’म्पर्क गर्न न’हुने पनि शास्त्रमा उल्लेख छ ।
किनभने विहानको समयमा शा’रीरिक सम्बन्ध राख्दा विभिन्न रो’गले स’ताउँदछ ।४. सूर्योदय भन्दा पहिला ’उठ्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो मात्र होइन यसले जीवनमा स’मृद्धि पनि लिएर आउँछ । विहान धेरै समय सु’त्दा तपाईलाई विभिन्न रो’गले सताउँछ । साथै लक्ष्मी पनि तपाईसँग रु’ष्ट हुन्छिन् ।
ललितपुरका मेयरको टा’उको का’ट्छु भन्ने व्यक्ति पक्राउ
सरिता गिरीको अभिव्यक्तिप्रति पूर्वजर्नेल बस्न्यातको आपत्ति : ‘ नेपाली सेनासँग टाउको दुखाइ किन ?’ भारतको आत्मा बोलेको हो , यिनको नारिकता र पद रद्द गर्नुपर्छ